TABABARKA QORAAGA MUSTAQBALKA & XIRFADAHA AKHRISKA – Hope Generation – جيل الأمل
TABABARKA QORAAGA MUSTAQBALKA & XIRFADAHA AKHRISKA
Wuxuu ahaa tababar ka duwan tababaraddii hore ee uu Ururku qaban jiray, Wuxuu ahaa tababar aad loogu baahi qabay, dhif iyo naadirna ku ah gayigeena guud ahaantiis, waxa ay ardaydu qaadanayeen duruus la xidhiidha Qoraanimadda iyo Xirfadaha akhriska oo ay la socotay tusaale iyo tijaabo (practical).
Jaamacadda CAPITAL Ee ku Taala Agagaarka isgoyska Siinaa ayuu tababarku laba maalin oo xidhiidh ah ka socday. Qabanqaabadda iyo abaabulka waxaa lahaa Naadiga Akhriska & Qalinleyda ee JIILUL AMAL faraca YAAQSHIID.
Naadiga Akhriska & Qalinleyda JIILUL AMAL waa naadi u taagan soo nooleynta iyo abuurista dhaqanka wax akhriska iyo inuu soo saaro Qorayaal badala Qorayaasha Qalaad ee sida qaldan Dalkeena iyo dadkeena wax uga qora, waxaana lagu aasaasay Magaaladda Muqdishu sanadkii 2015.
Tababarku wuxuu ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan oo dhamaan loo riyaaqay, wuxuuna ururku qaban doonaa Tababarro caynkan oo kale ah hadduu Rabbi idmo.
Ururka Dhalinta Rajadda Soomaaliyeed ( Jiilul Amal AMA Hope Generation) waa Urur Dhalinyarro Furan, Maxali ah Madaxbannaan, Ka shaqeeya Wacyigalinta, Waxbarashada, Tababaradda iyo Nabadda, Wuxuuna horseed u yahay Dhalinyaradda Soomaliyeed. Waxaana lagu aas’aasay Magaalada Muqdisho Sanadkii 2014.